‘धुपौरे’ विवादमा अनमोल केसीको स्पष्टीकरण – Mero Film
‘धुपौरे’ विवादमा अनमोल केसीको स्पष्टीकरण
फिल्म धुपौरेका कारण नायक अनमोल केसी विवादमा तानिएका छन् । एडभान्स लिएर फिल्म नगरेको फिल्म निर्माताले आरोप लगाएका थिए । यहि बिषयलाई लिएर चरित्र हत्या प्रयास भएको अनमोलले बताएका छन् । सामाजिक संजालमा स्ट्याटस पोस्ट गर्दै उनले यस विषयमा मुख खोलेका हुन् ।
हेरौ उनको पोष्ट जस्ताको तस्तै:
करीब ३,४ महिना पहिला “धुपौरो” नामक सिनेमाको साइन गरेको थिएँ । फिल्म साइन गरे बापत फिल्मका निर्माताले साइनिङ्ग अमाउण्टको रुपमा रु. ५ लाख दिनु भएको थियो । यहाँहरु सबैलाई अवगतै छ कि मैले फिल्म साइन गर्दा मेरो विवेकले भ्याएसम्म स्क्रीप्टलाई प्राथमिकता दिने गरेको छु । “धुपौरो” साइन गर्दा मैले यसको वानलाइन स्टोरी मात्र सुनेको थिएँ । स्क्रीप्ट तयार भएर आउँदा त्यो मैले सुनेको वानलाइन भन्दा धेरै फरक थियो । मैले निर्माता निर्देशकलाई स्क्रीप्टमा थप काम गर्न आग्रह गरें । स्क्रीप्टमा थप मेहनत गरेर अझै राम्रो सिनेमा बनाऊ भन्नु के मेरो गल्ती हो र ? तर उहाँहरुले त्यही स्क्रीप्टमा सुटिङ्गमा जान मलाई कर गर्नु भयो जुन मैले मानिन् । यही कुरामा मत बाझियो र यही स्क्रीप्टमा फिल्म बनाउनुहुन्छ भने तपाईँहरुको पैसा फिर्ता लिन सक्नुहुन्छ भन्दा उहाँहरुले लिन मान्नु भएन । र, अहिले अचानक उल्टो म माथी ठगीको आरोप लागेको सुन्दा म स्तब्ध भएको छु ।
२०७६ फागुन २५ गते १७:३९ मा प्रकाशित